Uvavanyo lweForex CFD Broker Libertex-Isikhokelo esipheleleyo sikaJanuwari 2022
Uphengululo lweLibertex: Ukusasazeka, iiMali zePlatifomu, iiasethi ezinesiko, kunye noMmiselo ka-2021
Ukuhlaziywa: 13 Novemba 2021
Kwakukho ixesha kwii-1980s xa umgangatho ophantsi wokurhweba wawuthathwa njengendawo yokudlala yezityebi. Kwezi ntsuku, iyafikeleleka nakubani na ononxibelelwano lwe-intanethi.
Ngapha koko, ngonyaka we-2021, kuqikelelwa ukuba baphantse babe zizigidi ezili-10 zabantu abathengisa ngokusebenzayo kwi-intanethi. Ezi ziindaba ezimnandi kumashishini e-broker akwi-Intanethi.
Namhlanje siza kuvavanya iqonga lokuthengisa elithandwayo laseLibertex. Kukho izixhobo ezingaphezu kwe-200 ze-CFD kule ndawo kwaye umrhwebi uphumelele amabhaso angama-30 kumazwe aphesheya- kubandakanya 'neQonga lokuRhweba ngokuBalaseleyo'!
Siza kuqala ngolwazi olunemvelaphi encinci kwinkampani, ngaphambi kokudlulela kwinto onokuyithengisa kwaye yeyiphi imirhumo omele ukulindela ukuyihlawula. Ukuphela kokufunda uphononongo lwethu lweLibertex ngokupheleleyo, kuya kufuneka ubenakho ukuthatha isigqibo esichaziweyo sokuba umthengisi ulungile na kwiimfuno zakho zorhwebo.
ILibertex -I-CySEC elawulwayo yeQonga kunye neQonga lokuRhweba leCFD
Ii-CFD zorhwebo kunye ne-forex kwisiseko se-zero
Iikhomishini zorhwebo eziphantsi kakhulu kwaye akukho ntlawulo ifihliweyo
Trade online okanye ngeqonga MT4
Njengoko besichukumisile, iLibertex iphumelele amabhaso amaninzi kubandakanya 'Elona qonga lokurhweba liBalaseleyo le-2021'. Umrhwebi ubesele ebonelela ngeenkonzo zorhwebo ukusukela ngo-1997, ebamba ngaphezulu kwe-2.2 yezigidi zabathengi abavela kumazwe ahlukeneyo. Iqonga lilawulwa kwaye lijongwe yiCySEC.
Ngokubhekisele kwizixhobo ezinokuthengiswa, iLibertex igxile kwiiCFDs. Ayisiyiyo le nto kuphela eyenzeka ngee-cryptocurrensets- kodwa ikwanokuthengisa ii-ETFs, amasheya, i-forex, isinyithi, ezolimo, ii-indices kunye negesi kwii-CFD. Vala izixhobo ezithengisekayo ngokweenkcukacha ezithe kratya kamva.
Ngokubalulekileyo, iLibertex yenye yabarhwebi abambalwa kwindawo yokutshaja kwi-Intanethi ziqinile isasazeka kubaxumi bayo.
Ndinokuthengisa ngantoni eLibertex?
Njengoko besitshilo iLibertex ijolise kwii-CFDs-oko kuthetha ukuba kukho amakhulu ezinto ezinokuthengiswa kweli qonga. Ezinye zezona zidumileyo zibandakanya ii-indices ii-CFDs ezinje ngeDow Jones kunye neDAX, ecaleni kwezinto ezifana neoyile yeBrent Crude.
Apha ngezantsi uyakufumana ukwahlulwa okupheleleyo kwezinto onokuzithengisa eLibertex.
Njengoko besilindele, ezona ntengiso ze-CFD ze-Forex kwindawo zii-GBP / USD kunye ne-EUR / USD. Nangona kunjalo, kukho iimfumba zemali ezingaphezulu ekunikezelweni, esizidwelise apha ngezantsi.
Izibini ezingaqhelekanga kubandakanya i-CHF / SGD, i-EUR / i-CNH, i-USD / i-DKK, i-EUR / i-NOK, i-GBP / i-SEK, i-EUR / iRUB, uya kufumana iimali ezifana neRandi yoMzantsi Afrika (ZAR) i-peso yaseMexico (MXN)
Izibini eziphambili ngokunikezelwa ngeLibertex zii-EUR / USD, AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD, USD / CAD, USD / CHF, kunye ne-USD / JPY
Izibini zomnqamlezo ziyafumaneka AUD / CAD, AUD / JPY, AUD / CHF, CAD / CHF, GBP / AUD, GBP / NZD, GBP / CAD kunye iimfumba ngaphezulu
Abathengi kwiLibertex banokuthengisa ngababini be-CFD nge-MT4 okanye usetyenziso lweLibertex.
Izitokhwe kunye neZabelo kwiiCFD
Ukuthengisa isitokhwe iiCFDs ngeLibertex kuthetha ukuba unokuthenga kwaye uthengise izikhundla ngaphandle kokuba ngumnini weasethi. Endaweni yokuba uqikelela ukuba izabelo ziya kuvuka okanye ziwe. Kwimixholo yesitokhwe, kukho ngaphezulu kwama-50 onokukhetha kuwo kweli qonga.
Asinakudwelisa nganye nganye, ke ngoko sidwelise iindidi ezikhoyo, kunye nemizekelo embalwa nganye:
Impahla zomthengi: Coca Cola, Nike, Adidas AG kunye Proctor kunye Gamble
Ubugcisa: INetflix, iSpotify, iDropbox, iTshayina yeSelfowuni, iVodaphone
Ihotele: U-Estée Lauder, uMichael Kors Holdings, uRalph Lauren, uTiffany kunye noC
Amashishini: I-Boeing, Umbungu
ZeMali: I-American Express, iQela leGoldman Sachs, iJPMorgan Chase kunye neCo, iMasterCard
Icandelo lemoto: Harley Davidson, Ferrari, Ford Motor
Amandla: Umbane de France (EDF), Enel Chile SA, PetroChina
Zonxibelelwano: Iapile, iAmazon, iHewlett-Packard, iPinterest, iMicrosoft, iTwitter
Ukhathalelo lwempilo: I-Aurora Cannabis, uJohnson kunye noJohnson, kwiQela lezeMpilo lase-United
Izinto zokugcina njenge-Sociedad Quimica y Minera de Chile (yenza isichumisi kunye neekhemikhali)
Kubalandeli bebhola ekhatywayo, kukho iqela lebhola ekhatywayo leJuventus SPA. Owona mthamo mncinci wentengiso yeStock CFD kufuneka ungabi ngaphantsi kwe-20 Euro.
Kwimixholo yee-indices, kukho iintlobo ngeentlobo zokuzibandakanya nezoqoqosho lwaseYurophu nolweMelika, ololulela kude laya e-Asiya, nakwa-Israyeli 35 eMbindi Mpuma.
Makhe sijonge ezinye ze-indices ii-CFDs onakho ukutyala imali kuzo eLibertex.
Ukuba unomdla kwiimarike zaseMntla Melika uya kufumana abadlali abakhulu abaqhelekileyo abanjengoDow Jones, S&P 500, NASDAQ 100, Russell 2000, ukubala nje abambalwa.
Xa kuziwa kwii-indices zaseYurophu ii-CFDs ungatyala imali kwi-DAX, Spain 35, FTSE 100, Italy 40, Russia50 Index kunye nokunye.
Iminikelo yaseAsia yiChina A50, Nikkei 225 kunye neHang Seng Index, kwaye eMzantsi Melika, sine-Index ye-Chile.
Ngokumalunga nezinto zeliqonga ungathengisa ngezixhobo zilandelayo usebenzisa iiCFDs:
Brent oyile ekrwada
Ukukhanya kweoyile emdaka
I-oyile ekrwada ye-WTI.
Izinyithi ezinje igolide kwaye zobhedu
Ukurhweba ngeCrypto CFD kwiLibertex kulula kakhulu. Umrhwebi unikezela uluhlu olubanzi lweemali ezixabisekileyo ezivela kwiBitcoin ukuya kwiChainlink.
Sibeke ndawonye uluhlu lwezinye zeengqekembe ze-crypto ezinokuthengiswa ukuze wazi ukuba uza kuba nakho ukufikelela phi eqongeni:
I-Litecoin / i-USD
I-Bitcoin Cash / USD
I-Bitcoin Golide / i-USD
I-Bitcoin Cash / Bitcoin (isibini esiphambanweni)
I-Litecoin / Bitcoin (isibini esiphambeneyo)
I-Bitcoin / i-EUR (isibini esiphambeneyo)
Ethereum / Bitcoin (umnqamlezo)
I-Ethereum Classic / i-USD
Monero / Bitcoin (isibini esiphambeneyo)
I-EOS / i-Ethereum (isibini esiphambanweni)
Kukho iimfumba ezininzi zokhetho lokurhweba nge-crypto eLibertex, kwaye njengoko besitshilo, kukho ukusasazeka okuqinileyo.
Kwabo bangaziyo- an ETF (Utshintshiselwano ngeNgxowa-mali eThengisiweyo) ihlala ibandakanya ukulandelela isiseko esisezantsi sokukhethwa kwezokhuseleko, kusetyenziswa iintlobo ngeentlobo zamashishini okanye iindlela ezininzi.
Nanku umzekelo wee-CFD ze-ETF ezikhoyo eqongeni- ezinokuphinda zithengiswe ngesicelo seMT4 okanye usetyenziso lweLibertex:
iShares Core US Aggregate Bond ETF i-CFD yenziwe ngamabhondi angama-27%, ama-28% okhuseleko lobambiso, kunye ne-45% yebhondi zikarhulumente
I-ETF CFD efanayo iyahluka ngokwendawo: 1% Canada, 6% eJamani, Mexico, Netherlands, Japan, Australia, Ireland, Colombia, kwaye 93% e-USA.
Qaphela, uya kuba 'urhweba' i-ETF ingentla nge-CFDs - njengazo zonke iimarike zezemali eLibertex.
Xa kuziwa kwimirhumo, umrhwebi ngamnye uya kwahluka. Unoko engqondweni, kubalulekile ukuba uhlale usenza uphando lwakho ngaphambi kokubhalisela iakhawunti yomthengisi entsha.
I-Libertex ayibizi ntlawulo yenyanga ngenkonzo yayo, kunye nokusasazeka okuqinileyo-kodwa ke, umrhwebi usafuna ukwenza imali. Unoko engqondweni, siza kuphonononga ezinye iirhafu ezimbalwa ukuba sijonge kwindawo yomthengisi.
Ukuba iakhawunti yomthengi ihlala ingasebenzi kangangeentsuku ezili-180 zekhalenda (okt akukho zorhwebo zenzekayo, akukho zithuba zivulekileyo, akukho kukhutshwa okanye kufakwa kwiidipozithi), inkampani inelungelo lokuhlawulisa umrhumo weakhawunti ye-10 EUR ngenyanga. (Oku kusebenza kubaxhasi abanemali eseleyo kwi-akhawunti engaphantsi kwama-5000 euros).
Ukuqhubela phambili kwimirhumo yasebusuku / ngokutshintsha inzala, le ntlawulo ihlawuliswa nakweziphi na izikhundla ezishiyekileyo zivulekile ekupheleni kosuku lokuthengisa. Ngokwezixhobo zeCFD, le ntlawulo iya kuphinda-phinda kathathu ukuba kunokwenzeka ukuba uqengqe indawo kwimpelaveki yonke.
Ukuhambelana kweQonga lokuRhweba
Ayingabo bonke abathengisi abahambelana nezixhobo zorhwebo zomntu wesithathu kunye namaqonga. Ngethamsanqa, kuyasivuyisa ukunika ingxelo yokuba ayisiyiyo kuphela i-Libertex ehambelana ne-MT4 edumileyo- kodwa i-broker ikwanayo neqonga layo kunye neapp.
Nalu ulwazi oluthe kratya malunga nezi zixhobo ziluncedo kunye namaqonga.
Uninzi lwabathengisi abanamava basebenzise iMT4 ngaxa lithile. Eli qonga lokurhweba lihambelana neLibertex lipakishwe kumanqwanqwa ngezixhobo zokurhweba eziluncedo, iitshathi kunye nohlalutyo. Ukurhweba ngeMT4, abarhwebi banokusebenzisa ngaphezulu kweakhawunti enye, nangokude basebenzise iirobhothi zokurhweba.
Sidwelise ezinye zezona zinto zibalaseleyo onokuzisebenzisa xa usebenzisa iMT4 ukuthengisa eLibertex:
Izikhombisi zendlela eziluncedo ezinje ngeMoving Average Convergence Divergence (MACD), iBollinger Bands, iAxponential Moving Average (EMA), Ichimoku kunye nezinye iimfumba ezingaphezulu
Izixhobo zokurhweba kubandakanya kodwa zingaphelelanga kwi-Orders Indicator, Isishwankathelo seXandra, itshathi ye-Undock, iShi Channel eyiNyaniso, ubungakanani beCustom Calculator, SL & TP values, Breakout Zones ,, Autofibo, i-Profit Tracker, NewsCal, nokunye okuninzi
Ukhetho lweodolo: ukuthengisa, ukuyeka ukuthenga, ukuthengisa isitopu, ukuthengisa umda, ukuthenga umda, ukuthenga ngentengiso kunye nokuthengisa ngentengiso
Qaphela, i-MT4 iyafumaneka ngesoftware yedesktop kunye nakwiselfowuni esebenzayo ngokupheleleyo. Ngokumalunga neyokugqibela, oku kukuvumela ukuba ugcine iithebhu zendlela iirobhothi ezisebenza ngayo ezenzekelayo-nokuba uphi!
Ngokufana newebhusayithi yeLibertex, elona xabiso lincinci lokurhweba kwi-Libertex usetyenziso ngokubanzi ziiyunithi ezili-10 kwimali yakho ($ 10, £ 10, njl. Ngale nto ithethwayo, isitokhwe se-CFD siphezulu kancinci kwiiyunithi ezingama-20.
Kukho iimfumba kwindlela yezalathi zobuchwephesha, iindaba zezemali kunye neempawu zorhwebo kwi-Libertex app. Abarhwebi bayakwazi ukukhuphela usetyenziso ngeGoogle Play ye-Android okanye iVenkile yeApple yeApple. Ngenye indlela, unokukhuphela usetyenziso ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yeLibertex.
Isicelo esisemthethweni silinganiswe kakhulu ngabasebenzisi, uninzi lwazo luyancoma usetyenziso loyilo olusebenzisekayo kunye nemisebenzi eluncedo. Ukusuka entendeni yesandla sakho, ungenza ii-odolo, ufumane ukufikelela kwiikowuteshini ezibukhoma, idiphozithi / urhoxe- nokunye okuninzi.
Izixhobo zokuThengisa kunye nezeMfundo
ILibertex iyakhanya xa kuziwa kwimathiriyeli yokufunda. Njengomthengi, uya kuba nokufikelela kwii-webinars, uninzi lweevidiyo zemfundo ezineenkcukacha kunye neendaba zezemali kunye nemiqondiso.
Ukongeza kumxholo wevidiyo, kukho izifundo ezimalunga nama-30 ezahlukeneyo zokurhweba ezijikeleze iiasethi ezahlukeneyo- kwaye ungalibali ukuba iakhawunti yedemo yasimahla ibandakanya idola yeedemo engama-50,000 XNUMX.
Kukho iimfumba zeendlela zokuhlawula ezikhoyo kule ndawo yomthengisi kodwa kuya kufuneka ujonge okukhoyo ngokuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo.
Apha ngezantsi sidwelise zonke iindlela zokuhlawula ezikhoyo kuzo zombini iidiphozithi kunye nokurhoxiswa e-UK. Xa ufake imali kwiakhawunti yakho uya kunikwa inqanaba elifanelekileyo leakhawunti.
Jonga iinketho zakho zokuhlawula apha ngezantsi.
Ikhadi letyala / leDebit
Iidipozithi zisimahla eLibertex kunye nexesha lokuqhubekeka xa imali yeakhawunti yakho ikhawuleza. Nangona kunjalo, ukuba ufaka imali nge-SEPA / ngocingo lwebhanki lwamanye amazwe kungathatha phakathi kweentsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 ukufikelela kwiakhawunti yakho. Eli xesha lokulungisa liya kulibazisa izicwangciso zakho zorhwebo.
Ngokwentlawulo yokurhoxa, kukho umahluko ngokuxhomekeke kwindlela esetyenzisiweyo. Nceda ufumane apha ngezantsi uluhlu lweendlela ezamkelekileyo zokurhoxa, ecaleni komrhumo (ukuba ukhona) kunye nexesha lokulungisa.
Ikhadi letyala - Intlawulo € 1 - Kwiintsuku eziyi-1-5
INeteller - Intlawulo ye-1% -Kungaphelanga iiyure ezingama-24
Skrill - Imirhumo yeZero - Kwiiyure ezingama-24
I-SEPA / ukuhanjiswa ngocingo kwebhanki yaMazwe ngaMazwe- i-0.5% min 2 EUR, max 10 EUR-Kwiintsuku ezingama-3-5
Iqela lenkxaso yabathengi beLibertex liyafumaneka ukusukela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ukuya kwi-8 kusasa kude kube yi-8 ngokuhlwa.
Iindlela zonxibelelwano ezifumanekayo kubathengi ziifowuni, i-imeyile, ileta, kunye nefom yoqhakamshelwano eqongeni.
Kukwakhona icandelo le-FAQ elichitha amacandelo oncedo kwiindawo ezinjenge 'bhanki', 'intengiselwano yorhwebo' kunye 'neemeko zorhwebo'.
Into enomdla kukuba, iLibertex ibonelela ngeakhawunti eyahlukeneyo esekwe kwinqanaba lobume bakho kunye nebhalansi yeakhawunti encinci. Ngamafutshane, xa ufaka imali yokwenyani kwiakhawunti yakho yorhwebo ungafikelela nakweyiphi na imigca yesimo kunye nebhalansi yakho.
Njengoko ubona cAmaxoki anokufikelela kwiakhawunti yasimahla yedemo ebandakanya i $ 50,000 kwimali yedemo yephepha. Le akhawunti yedemo iyafumaneka kuye wonke umntu.
Sicinga ukuba iakhawunti yedemo yeLibertex ibaluleke kakhulu kubarhwebi abatsha abangakulungelanga ukubeka emngciphekweni imali yokwenyani. Ngaphandle kwabatyali mali be-newbie, iiakhawunti zedemo zibalasele kubatyali mali abanamava abafuna ukuzama isicwangciso esitsha ngaphambi kokuntywila kwimarike ephilayo.
Uyivula njani iAkhawunti yokuRhweba ngeLibertex
Ukubhalisela iakhawunti ngeLibertex kulula kakhulu. Kodwa, ukuze uqalise, sidibanise amanyathelo amathathu okuhamba.
Inyathelo lokuqala lokutyikitya kukuya kwiwebhusayithi yeLibertex. Ifunyenwe ngaphezulu kwephepha kwicala lasekunene uza kubona 'ukungena' - cofa apha kwaye uya kusiwa kwiphepha elitsha.
Apho ubona ibhokisi yokubhalisa ngasekunene kuya kufuneka ukhethe 'sayina' kwaye ufake idilesi ye-imeyile kunye negama lokugqitha elikhethekileyo
Inyathelo 2: Faka kwiAkhawunti yakho yeLibertex
Ukucinga ukuba usete ngempumelelo iakhawunti yakho yeLibertex, ethatha ixesha elingaphantsi kwemizuzu embalwa- ungaya phambili kwaye uxhase iakhawunti yakho usebenzisa enye yeendlela ezamkelweyo zokudweliswa kweli phepha.
Ngoku ungaseta ujongano lwakho lweLibertex ukuze ilungele isitayile sakho sokurhweba. Nangona iqonga lokurhweba lingenakho ukwenza ngokwezifiso ngokupheleleyo, uyakwazi ukusebenzisa iitemplate ezahlukeneyo kwaye utshintshe ezinye iisetingi.
Isinyathelo 3: Qala ukuThengisa
Emva kokuba wenze ubuncinci be-100 EUR yediphozithi kwiakhawunti yakho ungaqala ukurhweba! Kulula ukuhamba kwiwebhusayithi yeLibertex, kodwa sicebisa ukuqala ngeakhawunti yedemo okanye idiphozithi yokuqala encinci- ubuncinci ngelixa ufumana iinyawo zakho eqongeni.
Lilonke, iLibertex ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo ezinokuthengiswa kwiqonga layo kwaye yenye yabarhwebi abambalwa kakhulu abanikezela ukusasazeka okuqinileyo- ngumculo kuzo naziphi na iindlebe zabarhwebi!
Ngokomxholo wemfundo, iLibertex ilungile kubaqalayo. Kukho ii-webinars, uhlaziyo lweendaba kunye nezifundo ezimalunga nama-30 zokurhweba ezifumanekayo kubathengi- ezihamba kunye neevidiyo ezicokisekileyo. Iqonga lokurhweba ngaphakathi endlwini lisebenza kakuhle, kwaye unokusebenzisa iMT4 ukurhweba ngokulula.
ILibertex ilawulwa ngokupheleleyo kwaye ilayisensi yiKhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTshintshiselwano yaseCyprus (i-CySEC). Oku kuthetha ukuba indawo ilawulwa ngokungqongqo kwaye kufuneka ihambelane nemigaqo ebekwe libhunga elo kuthethwa ngalo.
Ndidinga ipasipoti yokuvula iakhawunti yeLibertex?
Uya kudinga isazisi sefoto kodwa unokusebenzisa iphepha-mvume lokuqhuba ukuba kuphela kwento onayo - ngokomthetho weKYC kufuneka ibe sisazisi esisemthethweni esibonisa ifoto yakho, igama kunye nomhla wokuzalwa.
Ngaba ndiyakwazi ukuthengisa ii-cryptocurrencies ngeLibertex?
Ewe, kukho uluhlu olubanzi lwee-cyptocurrencies ezikhoyo kurhwebo kuleqonga- iLitecoin, iDASH, iBitcoin Cash kunye ne-Ethereum ukubala ezimbalwa.
Ngaba iLibertex iyahambelana neMetaTrader4 software?
Ewe. Unokufikelela ngokulula kwiakhawunti yakho yeLibertex ngeMT4, nokuba kukwi-app (i-Android okanye i-iPhone), okanye kwiwebhusayithi. Unokuzikhuphelela isoftware yeMT4 kwisixhobo sedesktop yakho uze ungene kunye neziqinisekiso zakho zeLibertex
Ngaba ikhona iakhawunti yedemo yeLibertex?
Ewe. Wonke umthengi wamkelekile ukuba asayinele iakhawunti yasimahla-oku kuza ne- $ 50,000 kwimali yedemo, kunye nezipili iimeko zentengiso
Ngaba iLibertex iyafumaneka kubahlali baseMelika?
Ngelishwa abahlali base-US abanakho ukurhweba ngeLibertex. Isizathu soku kukuba iLibertex ilawulwa yiCySEC- hayi iKomishini yoRhwebo lweKamva yezoRhwebo (i-CFTC) okanye iKhomishini yoKhuseleko ne-US yoKhuseleko (i-SEC).
Ngaba iLibertex liqonga elisemthethweni lokuthengisa?
Ewe. ILibertex ilawulwa ngokupheleleyo yiCySEC. Oku kufanele kukunike uxolo lwengqondo lokuba inkampani ingenisa uphicotho rhoqo, ikwenza ngenyameko kubathengi kwaye kufuneka ihambelane nemithetho engqongqo ebekwe ngumzimba.